"Just quit and go": Protestors have a message for Zimbabwe president Robert Mugabe — Quartz
Nothing subtle about it.	(AP/Tsvangirayi Mukwazhi)
A jobless University graduate demonstrates outside of parliament in Harare. (AP/Tsvangirayi Mukwazhi)
Police broke up a march in Harare on Aug. 3. (Reuters/Philimon Bulawayo)
A cameraman is assaulted by police during demonstrations in Harare on Aug. 3, 2016. (AP/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe police officers clash with protestors in Harare. (AP/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwe police clash with protestors in Harare on Aug 3. (AP/Tsvangirayi Mukwazhi)
A cross with the Zimbabwean flag wrapped around it is lifted during demonstrations. (AP/Tsvangirayi Mukwazhi)